drivehaft tsy handray anjara
Namaly ny drivehaft tsy handray anjara by positron
Rehefa nesoriko ny tarika ambany nataoko dia tsy hipetraka ao amin'ilay singa ilay zana-kazo ho hitako fa misy karazana "lakile" ary niafara tamin'ny fihazonana ny vodin-tsambo ambany aho nanoloana ny valindrihana.
Ity misy kisary. https: / ...
- Fanavaozana- Namboariko ny rohy.
Namaly ny Ity misy kisary. https: / ... by ttravis
Ny ratsy nataoko .... Andramo izao: http:…
Ny ratsy .... Andramo izao: http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1957&…
Ity ny scenario misy ahy, ary miala tsiny mialoha aho raha tsy izany no toerana na endrika mety amin'ny fanontaniako fa vaovao amin'ny forum tahaka izao aho. Manan-janaka lahy tia fanjonoana aho ary nanjono amoron-dranomasina izahay taona vitsivitsy lasa izay, saingy efa antitra izy ka te hivoaka amin'ny farihy. Vaovao tsara dia mipetraka any Minnesota izahay ka farihy marobe, vaovao ratsy fa mbola tsy nitety sambo mihitsy aho. Nahazo fiara 14'boat / tranofiara avy amin'ny olona iray izahay ary maotera maotera 3hp evinrude. Fanombohana tsara hoy izy ireo fa mandeha tsara. Navoakanay tamin'ny fotoana natambatra izany ary ok ihany. Raha ny tokony ho izy, ny tiako holazaina dia mbola miadana be ny throttle feno, saingy nieritreritra aho fa 3hp io, voatery nitazona ilay throttle 3/4 ho feno aho mba hihazakazahany. Dia nanomboka maty avy hatrany. Nahatsikaritra aho fa niverimberina niova lalana nandritra ny 3 segondra, angamba momba ny toerana tokony hisy azy. Saingy saika namela anay nitanjozotra tao anaty farihy izany ary tiako ny hiarahanay manamboatra azy io saingy vaovao amin'ny motera 2 aho. Hatreto dia nanova plugs aho ary nanary ny lasantsy tanteraka hanomboka vaovao. Apetraho ny tanky ary nitovy tamin'ny teo aloha izy io. Izay toro-lalana / làlana rehetra dia hankasitrahana. Avy amin'ny famakiana ity tranokala ity dia toy ny kitapo karbôbika no fanombohana tsara. Misy sosokevitra ve?
Diniho tsara ilay may. Ny rehetra sy ny tiako holazaina dia ny motera HP 3 REHETRA izay mila coil vaovao ny taloha, ary mety hanova ny teboka sy ny condencer koa rehefa eo ianao. Tsy azonao atao ny milaza hoe ratsy na tsia ireo faritra ireo amin'ny fijerena azy ireo.
Vao nividy HP Johnson 3 aho ary manamboatra azy io. Manana traikefa be dia be aho amin'ny valiha sy maotera 2. Natolotra ny volana jolay lasa teo ny hafatra nataonao fa vao niditra aho. Raha afaka manampy aho dia ampahafantaro ahy. Ny Johnson 3 dia misaraka izao miandry ny kojakoja fanoloana. Ma maotera mahafinaritra sy mora miasa tokoa izy io - novolavolaina ho izy. Raha tsy fantatrao fa i Johnson sy Evinrude dia motera fototra mitovy.
Ka azoko avokoa ny faritra rehetra momba ny rafitra fanapoahana avy amin'ny amazona noho ity tranonkala ity. Tena mora izany. Nanaraka ny fanamafisam-peo aho hatramin'ny faran'ny fotoana tamin'ny alàlan'ny metatra ohm mahazatra ary tao no nahavery ahy. Tsy mahalala na inona na inona momba ny herinaratra aho ka ny terminolojia toy ny open closed tsy manam-petra sns.
Alao sary an-tsaina ny fizaran-tany tsotra misy bateria sy jironao. Rehefa manana tariby avy amin'ny bateria mankany amin'ny jiro ianao, ary avy eo amin'ny jiro hiverina any amin'ny bateria dia manana faritra mihidy ianao. Ny herinaratra dia mikoriana amin'ny làlana tsy tapaka raha mivoaka amin'ny lafiny iray amin'ny batery izy ary mankany amin'ny ilany hafa. Raha te-hifandray ny iray amin'ireo tariby ianao dia hanokatra ny faritra manodidina anao, toy ny fisokafan'ny jiro mahazatra ary manidy faribolana ny jiro. Miasa toy izany koa ny valves-drano .... sokafinao na akatonao izy ireo.
Raha maka ny metatra ohm anao ianao ary manohina ireo probe roa, dia hampiseho 0 na circuit mihidy ny metatra ohm anao. Raha tsy mifampikasoka ny famotopotorana dia tsy misy farany na boribory misokatra ny famakiana. Ny metatra ohm sasany dia misy toerana hipetrahan'ny metatra rehefa mikatona ny faribolana. Io dia antsoina hoe fitsapana mitohy.
Ny metatra ohm dia azo ampiasaina hanandramana raha misokatra ny circuit na mihidy. Andao lazaina fa te-hitsapa jiron-jiro tokantrano mahazatra isika. Raha apetrakao eo am-pototry ny volam-by ny firamaintrehana iray metatra ohm ary ny iray kosa eo amin'ny mpampitohy afovoany dia hizaha ny metatra ohm hahitana raha afaka mandeha ao anatin'ny filamentam-bola ny herinaratra. Raha tapaka ny filamentana dia misokatra ny fizaran-tany araky ny fanoherana tsy manam-petra (tsy mandeha amin'ny herin'ny rivotra ny herinaratra) noho izany misokatra ny circuit ary may ny jiro. Raha mahazo famakiana amin'ny metatra ohm izay 0 na efa ho 0 ianao, dia mandeha amin'ny alàlan'ny filament ny herinaratra ary tokony ho tsara ny jiro. Ny ohmmeter dia tsy mandefa herinaratra ampy hanazavana ny jirony, fa kosa hanamarina ny fitohizany, na handoana ny faritra na hisokatra na mihidy.
Makà akaiky Jereo ny 5.5 HP Ignition Page izay anaovako asa tsara kokoa manazava ny fomba hitsapana ny fotoana. Motera hafa izy io, fa ny rafitra fandrehitra dia mitovy tanteraka. Matetika aho mamporisika ny olona hamaky HP 3.5 sy 5.5.
Ny fitsapana mitarika anao amin'ny ohm dia tsy hiditra eo ambanin'ny vitsika mba hitsapana ny fandaharam-potoana mba hahafahanao mampifandray ny tapa-taratasy kely fohy amin'ny teboka. Test tariby miaraka amin'ny alligator clip dia mora sy mora ampiasaina. Azonao atao ny mahazo azy ireo avy amin'ny magazay fivarotana fitaovana eo an-toerana, na Amazon. Atsofohy amin'ny sisin'ny visy ny faran'ny kofehy fanandramana, eo amin'ilay toerana fanapahana, izay ahafahanao mampifandray ireo tariby coil sy condenser araka ny hita ao amin'ny 5.5. Fahano ny faran'ny iray hafa tariby fanandramana midina amin'ny lavaka ao amin'ny fototr'ilay stator.
Azonao atao izao ny mitsapa raha misokatra na mihidy ny hevitrao amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny fitarihana metatra ohm anao amin'ny fitiliana, ary ny iray kosa amin'ny tany. Amin'ny alàlan'ny tany, ny tiako holazaina dia vy tsy misy vy na visy miakatra eo amin'ny motera. Ny motera mihitsy no mitarika fitsapana hafa.
Wow, tena nilaina izany. Nanaraka ireo torolàlana ireo aho ary afaka namita ny rafitra fandrehitra. Napetrako tao anaty siny iray ary nohazakazako. Nihazakazaka tsara kokoa izy io saingy mbola tsy hampiakatra avo dia avo, ary setroka manga fotsy na inona na inona fanitsiana ny karibonetra. Mihazakazaka kokoa izy io rehefa mamadika ny bokotra fanitsiana ankavanana aho, nefa mivoaka alohan'ny fivelezana ok.
Vao nandany ny roa andro lasa teo amin'ny farihy. Mahafinaritra ity tranonkala ity ary ahafahako manamboatra môtô kely. Miadana sy milamina izy io ankehitriny. Misaotra an-tapitrisany amin'ny fanampiana rehetra. Ny zanako lahy no nitondra azy io androany, tamim-pitsikiana be.
Azoko antoka fa manana fankasitrahana lehibe ianao izao satria fantatrao tsara ilay motera. Manantena aho fa nampiditra ny zanakao lahy ianao mba hahazoany traikefa haharitra mandritra ny androm-piainany. Mahagaga ny isan'ny olona manamboatra ireo motera HP 3.5 ireo. Nijery antontan'isa vitsivitsy momba an'ity tranonkala ity aho. Androany dia olona 234 no nitsidika ilay tranonkala ary nandany fotoana tamin'ny famakiana momba ilay tetikasa 3.5. Ireo mpitsidika ireo dia avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao sy amin'ny fiteny maro samihafa. Tsy ao anatin'izany ny motera hafa. Ny 3.5 no tetikasanay malaza indrindra. Ankafizo ny moto ary enga anie haharitra 50 taona farafaharatsiny. Raha mahazo vintana ianao dia mandefasa sary eto. Ny sary sy ny hevitra tahaka ny anao no valisoa lehibe indrindra azoko. Tom
Tsy mila mandany fotoana ny…
Tsy mila mandany fotoana ny moteranao ianao. Natao ho anao io rehefa vita. Hamarino tsara fa ny teboka cam eccentric dia napetraka tsara amin'ny crankshaft ary apetraka tsara ny takelaka teboka. Raha mahazo faritra vaovao, coil, condenser ary teboka vaovao ianao dia apetraho fotsiny izy ireo ary aolaho ireo teboka ary soloo ny flywheel.
Nanamboatra Evinrude 3hp aho tamin'ity fahavaratra ity, midika hoe, faritra misy ny afo vaovao, kit kitapo sns ... Amin'ny ankapobeny dia avy amin'ity tranonkala ity. Nentinay nanjono tokony ho am-polony teo ho eo izy io, ary tena tsara ilay izy. Mbola hilentika ihany izy, toy ny fohy amin'ny solika, eo amin'ny elanelam-potoana, fa ny hafainganam-pandeha ambany sy ny malalaka misokatra kosa dia efa nandeha mafy. Nahita olana vaovao aho izao. Izahay dia naka azy io lavitra tamin'ny fandefasana sambo ary rehefa afaka nihazakazaka nandritra ny 15 minitra dia hanomboka hiakatra / hikororoka tena ratsy tokoa. Raha tsy miasa ambany aho dia hampiverina amin'ny fandefasana azy, fa haingana = miharatsy kokoa ny fihazakazahana. Nanomboka nibolisatra tamin'ny fanitsiana aho, ity motera ity ihany no manana ilay izy, tsy azoko atao ny miala amin'io fepetra io. Ny manamarika dia ny zava-misy vao hitako niaraka tamin'ny fanjaitra fanitsiana nipetraka tanteraka, na hatreto, mbola tsy ho faty ilay motera. Vaovao amin'ny motera aho fa tsy izany fanapahana lasantsy izany ve no hahafaty ny motera? Plugins, etona, coil vaovao, faritra misy gazy, stabilizer solika, tariby, teboka sns. Rehefa nosoloiko ny plugs dia nisy mainty, flakey, basy vita amin'izy ireo saingy hitako ratsy kokoa. Mifoka setroka fotsy / manga izy rehefa manomboka azy voalohany, nefa tsy misy zavatra masiaka. Izaho sy ny zanako lahy dia nahita lavaka crappie vitsivitsy tany an-dafin'ny farihy, ary mahafinaritra ny mahita ny fihetsika nasehony rehefa nanakodia haingana azy ireo izy rehefa namely ny rano ny kankana. Na izany aza, tsy te ho tratry ny 20 minitra aorian'ny fandefasana aho. Sahabo ho 500 hektara ny farihy, tokony haharitra 3hp eo amin'ny 15-20 minitra ve vao handrakotra an'io rano be io? Ity no sambontsika voalohany ka tsy azoko antoka, fantatro fa ny 3hp dia tena kely ary tsara ho an'ny trolling.
Tena azo atao izany ary tsy fahita fa mety mila esorinao io karbaona io ary diovina tsara indray. Ny olana amin'ireo motera taloha izay averina amin'ny laoniny dia ny sombintsombiny kely ao anaty fitoeran-tsolika, ary ny famoahana solika dia mirona mihetsiketsika ary manentsina ireo làlan-karburetor. Andrasana izany. Na dia nanao izay tsara indrindra vitanao tamin'ny fanadiovana ny zava-drehetra aza ianao, dia tsy misy toa ny solika mampihetsi-po mba hamaha ny zavatra rehefa mandeha ny fotoana. Tsy maintsy nanadio carburetor indroa na intelo aho alohan'ny nahatsapako fa tafaverina tanteraka ilay motera. Tsara sy ara-dalàna daholo izany. Raha mandroraka any amin'ny elanelana avo na antonony na ambany ianao, dia mety hidika izany fa sakana ny làlambe iray ao amin'ny karbaona. Ary koa, ny fanjaitra fanitsiana, rehefa vitanao ny manamboatra azy dia avelao irery. Tsy ampiasaina amin'ny fampijanonana ny motera io. Ajanonao ny motera amin'ny alàlan'ny famindranao ny levers throttle mankany amin'ny toerana fijanonana izay manidy ny valizy lolo ao anaty karbônika. Tsy mila kitapo misy gazy vaovao ianao hanadiovana ny karbaona fanindroany na fanintelony amin'ny vanim-potoana mitovy.
Ny solika impeller sy boaty fanoloana soloina, nanamboatra ny starter recollil, ny carburetor ary ny ignition ary nanadio ny tanky tamin'ny mahia mahia, tamin'ny JW1966 21 ahy, ary nahavita be tamina gazy feno. Fahatelo na fanintelony mivoaka amin'ny trolling, hikorontana izy ary ho faty. Rehefa nipetraka minitra vitsy izy dia nanomboka ary nihazakazaka nandritra ny fotoana fohy, avy eo nandrora ary maty. Niverina teo amin'ny lampihazo tamin'ny alàlan'ny fanodikodinana ny kenda mba hitazomana azy, izay niteraka setroka betsaka. Fantatra ve?
Vonoina ny sivana solika dia vatan-kazo metaly sinônaly voatondraka izay mijoro mitsangana ao anaty tanky eo am-pivoahana. Rehefa feno ny tanky dia naroboka ampy ny sivana mba hamelana solika ampy, fa rehefa nilatsaka ny solika dia tsy ampy ny fikorianan'ny solika. Tsy azoko natao ny nanala ny sivana solika hanadio azy. Mety afaka nanadio teo amin'ny toerany tamin'ny famenoana tanky na famerenana rano amin'ny solvent ratsy, na ny famoahana azy tamin'ny alàlan'ny hafanana sy / na Kroil, saingy very faharetana izy ary namoaka azy ary nametraka sivana tsipika teo anelanelan'ny fivoahan'ny tanky sy ny karbaona. . Ankehitriny dia mandeha tsara ny JW-ko! Afaka mampidina ny Grumman Sport Boat ahy amin'ny hafainganam-pandeha miadana be. Mihazakazaka tsara kokoa isaky ny mivoaka.
MANDROSO NY FANORENANA NY R&R NY TANTER FUEL FILTER MBOLA TSY MAINTSY ATAON'NY LISTA HO AN'NY FANORENANA AN'ity Modelin'i JOHNNYRUDES ity.
Vao nividy Johnson 3HP aho ary tsy azo diovina intsony ny sivana solika vita amin'ny alimo. Nanandrana lacquer mahia aho ary na dia asidra Muriatic aza. Ny solika dia hikoriana fotsiny ho an'ny 1/2 voalohany amin'ny tanky. Nentiko nivoaka ny sivana ary notapahiko ny hetsi-kazo varahina sinterd an'ny fantsom-barahina. Miandry sivana VW misy etona avy any eBay aho hanaparitaka ny efijery varahina eo amin'ny fantsom-pianarana ho an'i Johnson. Azonao atao ny mividy sivana style OEM vaovao eo amin'ny $ 40.00 fa tsy handoa izany aho. Nodioviko ny fitoeran-tsoliko tamin'ny fandatsahana BB sahabo ho 750 eo ho eo sy lacquer mahia kely. Nividy plug-nosy vitsivitsy tany amin'ny magazay harware aho hametahana ny lavaka famenoana solika sy ny lavaka famahanana solika avy amin'ny carburetor. Navoakako indroa tao anaty tank ny jiro velona ary avy eo nodiako tamin'ny Formula 409 sy rano. Madio tanky.
Faly mandre fa miasa amin'ny retrofit anao izany. Nanao fikarohana aho. Ny laharam-pizarana Evinrude ho an'io sivana ity dia 0594034. Tsy hitako tany Amazon izany, fa nahita vitsivitsy voatanisa ao amin'ny eBay.
Rehefa tsy mahomby daholo ny hafa rehetra, andramo eBay. Mividy ampahany betsaka ao aho ary mikasa ny hisoratra anarana amin'ny maha-mpikambana eBay, toa ahy amin'ny amazon.com.
Inona no vakin'ny famatrarana amin'ny testeranao? Tokony ho 70-80 psi.
Sarotra ny mahita ampahany. Mety ho tsara kokoa aminao ny mitady motera misy ampahany amin'ny e-bay. Indraindray izy ireo dia manana azy ireo amin'ny vola kely lavitra noho izay laninao amin'ny ampahany.
1963 Evinrude 3hp 3303s marinina an-dranomasina.com be loatra pistons peratra sy maro hafa
Tsia, mihodinkodina ny manontolo…
Tsia, ahodinao manodidina ny motera iray raha te hiodina ianao. Nantsoina hoe "dock busters" ireo satria tsy misy miandany na miverina. Amin'ny tena fampiasana dia tsy olana izany.
Namaly ny Tsia, mihodinkodina ny manontolo… by ttravis
Misy toerana kely misy mpivady mandefa rano sy mandany ny faritra ambany. Tsy misy rano be dia be mivoaka. Ny ahy dia mitovy amin'ny vola ampiasain'ny mpanao kafe.
Izaho dia nanana olana mitovy amin'ilay maotera tetikasa 3 HP-ko. Tsy maintsy namono ny lalana rehetra aho.
aleo ve esoriko ny motera ary io no toerana tokony hivoahan'ny rano ary nesorinao fotsiny ny lohanao
Novakiako tamin'ity tady ity fa ny habetsaky ny rano mivoaka amin'ny Exhaust Relief dia tokony hitovy amin'ny mpanamboatra kafe mitete. Holazaiko fa ny ahy dia momba an'izany. Na izany aza, sahiran-tsaina aho amin'izany, mafana be ny lohako aorian'ny fitsapana fitsapana minitra vitsy izay tsy tiako ny mitazona izany ny tanako. Thoughts?
PS - Ity no lahatsoratro voalohany amin'ity tranonkala tena manampy ity. Misaotra antsika rehetra.
Mila ny laharana maodely aho mba hahafahako mamaly bebe kokoa ny fanontanianao. Ny motera sasany dia misy termostat azo soloina; ny sasany tsy.
Tsy misy termostat ao amin'io motera io. Toa marina ny habetsaky ny rano. Raha tsy azonao atao ny mitazona ny tananao amin'ny loha-herinaratra, dia mety hanana famerana ianao. Azonao atao ny mieritreritra ny manala ny lohan'ny varingarina mba hahitana hoe toa inona izany ary angamba diovina. Rehefa manolo azy ianao dia aza hadino ny mampiasa gasket loha vaovao .... Tom
Manoro hevitra anao aho ny hahazo gasket an-doha mety. Ny RTV dia mety tsy dia mahazaka ny tsindry sy ny hafanana, miampy ny fidirana ao anaty palitao rano ka hiteraka olana. Tsy haiko izay misy anao, fa ho ahy dia tsy lafo ny lasantsy loha. Fantatro fa ny olona sasany eto amin'izao tontolo izao dia sarotra ny mandray anjara ary mila manamboatra bebe kokoa.
Nesoriko ny herinaratra ary notadiaviko ny lalan'ny rano rehetra avy amin'ny fidiran'ny mpanentana mankany amin'ilay toerana alehany miaraka amin'ny fako ao amin'ilay singa ambany. Nampiasa fantson-drivotra aho ary tariby tsara ary bitsika fandavahana marobe mba hamafana ny zava-drehetra. Mino aho fa nanoratra momba izany na amin'ny tetikasako 3.0 na 5.5. Jamba ny sasany tamin'izay, koa nampiasa ny fantson-drivotra aho mba hitsofohana rivotra sy hahitako izay ivoahany. Elaela. Ny ankamaroan'ireo passageways dia kely ary mora mijanona, ary mamono motera maro.
hoy ry zalahy olana vaovao lol nanala ny lohany ary nanadio ny lalan-drano rehetra niforitra be nefa rehefa avy nametraka ny lohany (tamin'ny fampiasana ny gasket tany am-boalohany) ary izao dia tsy hanomboka izao ny motera fa mariho mandritra ny segondra vitsy aorian'ny nametrahana karbika madio ao amin'ny efitrano fandoroana fa aorian'izay tsy misy .... ahoana ny hevitrareo
Miorina ve ny fanjaitra? Ianao ...
Miorina ve ny fanjaitra mitsingevana? Angamba ianao nanana ny lohan'ny herinaratra nivadika izay nanery ny fanjaitra lasa toerana mahazatra.
vao avy nandinika an'i Johnson 50 taona teo ho eo aho; karbaona, fandrehitra, impeller, ny asa. Izy io dia manana spark tsara nefa avy hatrany dia tondradrano, hatrany amin'ny toerana izay mitete ny entona avy amin'ny fifandraisana carburetor / air silencer. Rehefa nanamboatra ilay karbaona aho dia very ny loharano kely mitazona ny fanjaitra mitsingevana. Satria ny sasany amin'ireto carburatera ireto dia tsy manana lohataona, averiko miaraka tsy misy azy io. Tondra-drano izy io. Noho izany, nesoriko ny vilia mitsingevana ary nametrahana loharano hitako teo amin'ireo faritra taloha (manana efatra 3 hp Evinrude / Johnson's) aho. Mbola tondra-drano izao.
Nataoko ny fihodinan'ny fanjaitra haingam-pandeha 1 & 1/2 ary ny fihodinan'ny fanjaitra ambany 3/4.